Qubanaha » Gaas oo ka hadlay isku shaandheyn oo ku sameynayo Golaha Wasiirrada Puntland
Gaas oo ka hadlay isku shaandheyn oo ku sameynayo Golaha Wasiirrada Puntland
Qubanaha.net-Garoowe-Wareysi uu siiyay Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayuu kaga hadlay xaalada Puntland ka jirta, isagoo xusay in maamulkiisa wax bqadan qabtay mudadii xilka uu hayay.
Mar wax laga weydiiyay is bedelka uu damacsan yahay inuu ku sameeyo Wasiirada ayuu ka gaabsaday xilliga ay dhaceyso, isagoo xusay in wararkaas ay yihiin kuwa suuqa.
“Is bedelka dowliga ma ahan mid suuqa laga sameeyo iyo maqaadaha, dadka iyaga iska jecel, dowladda is bedelka iyo tallaabada ku haboon ayay waqtigeeda qaadeysaa, warkaas warka suuqa weeye, marka ay soo baxda ayaa arkeynaa”ayuu yiri C/wali Gaas.
Mar la weydiiyay caburinta uu ku haayo saxaafada Puntland, ayuu sheegay in aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in maamulkiisa aanay jirin cid uga dabacsan Saxaafada, isagoo xusay in marar badan wax laga sheegay, ayna dadka xir xirin oo aanay afka qabin.
Hase ahaatee cid kasta oo kicin bulsho sameyneysa, isla markaana abuureysa qal qal ayuu sheegay in aanay ogolaan doonin, taasna aanay aheyn saxaafad, waxaa uu tibaaxay in wariyaha looga baahan yahay in wixii jira uu ka hadlo.